FCJ – Faithful Companions of Jesus (Profile 2019)
1. FCJ SOCIETY (FCJ )
The Society of the Sisters, Faithful Companions of Jesus (FCJ) was founded in Amiens, France on Holy Thursday 1820 by Marie Madeleine d’Houet (1781 – 1858).. Since then, the Society has spread to 16 countries. On March 30, 2020, we will celebrate 200 years as FCJ. The bicentenary celebration will be on September 21, 2019 (the birthday of Marie Madeleine d’Houet) until the Solemnity of Christ the King, November 22, 2020. The FCJ Generalate is now in London, UK.
FCJ Sisters are called to follow Jesus in faithfulness, to stand at the foot of the cross with Mary and the holy women and there, to become one with Christ in his thirst for the coming of the reign of God. Strong in companionship with Jesus and with each other we work together in the service of the Church to build the body of Christ. FCJ Sisters live Ignatian Spirituality and seek to find God in all people, in all places, and in all things.
The essence of our mission as Faithful Companions of Jesus is to be with Jesus in his mission. As the FCJ Constitutions state, we are called, like Mary, Mother of Jesus and Mother of the Church, and like the holy women, messengers of the Good News. We are sent to proclaim the Truth, Jesus who is alive and lives among us, who is Son of God and Saviour of the world. The mission is the whole of our lives given in service: it is not only what we do but more importantly who we are. Wherever we are and whatever our work, we are sent and our mission is to be faithful companions of Jesus.
We are now widely spread, living in the Area of Asia (Indonesia, Myanmar, and the Philippines), Area of Australia, Area of the Americas (Canada, USA, and Argentina) and the Area of Europe, (Ireland, Britain, France, Switzerland, Belgium, Germany, Italy, and Romania). We also minister in South Sudan, Africa. We are united in heart and mind, committed to living our charism of faithful companionship with Jesus and are enriched by our cultural diversity and internationality.
FCJ in Myanmar
On January 9th, 2009, the FCJ Sisters started their mission in Myanmar. Three sisters: Agnes Samosir and Fransisca Arti Setiati (both from Indonesia) and Marion Dooley (from Ireland) were sent to establish the first community in Yangon. With joy, we welcome two of our first Myanmarese FCJ when Maria Khaing Nyein Aye and Cecilia Marip Seng Ja made their first vows in Yangon on December 8, 2018. The community in Yangon now has four FCJ sisters: Emiliana Beta Suryawati, Fransisca Arti Setiati, Maria Sunarni, and Cecilia Marip Seng Ja.
The FCJ Sisters are involved in education as well as in the informal education of various women’s groups, youth groups, young adults, and children. They are also involved in the spiritual development of people and have programs in boarding houses and parishes, personal spiritual accompaniment, andamonthly retreat for young women. We also haveapreschool in Dalla, Yangon.
At present Sr. Sisca works at Myanmar Leadership Institute and Sr. Narni works in Pastoral ministry at Campion Institute. Sr. Beta still learns Burmese while at the same time involves in youth ministry. Sr. Cecilia is the coordinator for preschool and also is working part-time in GEN (Gender Equality Network)
Having been in Myanmar for almost ten years, and celebrating 200 years of FCJ in the world, we hope that FCJ roots grow deeper, and FCJ charism and spirituality to flourish in the lives of the people in Myanmar.
FCJ Address in Myanmar:
33A Thirimingalar Street, Ward No (8),
Kamayut Township, West District, Yangon
ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေများ အသင်းဂိုဏ်း အကြောင်း ၂၀၁၉
သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသော မိတ်ဆွေများ (FCJ) အသင်းဂိုဏ်းကို သန့်ရှင်းသော ကြာသပတေးနေ့ကြီး သက္ကရာဇ်(၁၈၂၀)ပြည့်နှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ အေးမီး(စ်) မြို့၌ မာရီ မာဒလင်း (Marie Madeleine d’Houet) (1781 – 1858)မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမှစ၍ သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသော မိတ်ဆွေများ (FCJ) အသင်းဂိုဏ်းသည် နိုင်ငံပေါင်း (၁၆) နိုင်ငံ ပြန့်ပွား သာသနာပြုလျှက် ရှိကြပါသည်။ အသင်းဂိုဏ်း၏ နှစ်(၂၀၀) ပြည့်ပွဲတော်ကို လာမည့် ၂၀၂၀ မတ်လ(၂၀)ကျင်းပသွားပါမည်။ နှစ်(၂၀၀)ပြည့်ပွဲကို (၂၀၁၉)စက်တင်ဘာ (၂၁) ရက်နေ့၊ မာရီ မာဒလင်း၏ မွေးနေ့မှစတင်ပြီး (၂၀၂၀) နိုဝင်ဘာလ(၂၂) ခရစ္စတူးဘုရင်ပွဲနေ့တိုင်အောင်ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်မတို့၏ မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးကတော့ လန်ဒန်မြို့၌တည်ရှိပါသည်။
သစ္စာရှိစွာ သခင်ယေဇူး၏ နောက်တော်သို့ မယ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောသူတော်သူမများကဲ့သို့ ကားတိုင်ခြေရင်းတွင် သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေများအဖြစ် လိုက်လျှောက်ရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ရောက်ရှိရန် သခင်ယေဇူး၏ပြင်းပြသော တောင်းတမွတ်သိပ်မှု၌ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိရန် ယေဇူး ၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မိတ်ဆွေရဲဘော်၊ ရဲဘက်များအဖြစ် သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေများ အသင်းဂိုဏ်း သီလရှင်များသည် စိန်အိန့်နီးရှတ်၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ ကျင့်ကြံပြီး ဘုရားရှင်အား အရာအားလုံး၊ လုသားများအားလုံးနှင့် နေရာဒေသများ အားလုံး ၌ ရှာတွေ့ရင်းဖြင့် သာသနာပြုလျှက်ရှိကြပါသည်။
သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေများအဖြစ် သခင်ယေဇူးနှင့်သာသနာပြုကြရင်း၊ FCJ အခြေခံစည်းမျဉ်းရှိသည်နှင့်အညီ မယ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောသူတော်သူမများကဲ့သို့ သတင်းကောင်းဝေငှရန်၊ သခင်ယေဇူးသည် ကျွှှန်ုပ်၌ ရှင်သန်လျှက်ရှိနေသော အမှန်တရားဖြစ်ကြောင်းနှင့် လောကအပြစ်ကိုကယ်ချွှှတ်သော ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာဝေငှရန် ကျွှန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသာ မဟုတ်ပဲ ကျွှန်ုပ်တို့မည်သူဖြစ်သည် နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးပေါင်းစပ်လျှက် သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေများအဖြစ် ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ် ဆက်ကပ်သွားရန် စေလွတ်ခံရသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။
သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသော မိတ်ဆွေများ (FCJ) အသင်းဂိုဏ်းဝင် သီလရှင်များသည် အာရှဧရိယာတွင် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖီလစ်ပိုင်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၌၎င်း၊ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ အမေရိကာဧရိယာတွင် ကနေဒါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အာဂျင်တီးနား တို့၌၎င်း၊ ဥရောပတိုက်ဧရိယာတွင် အိုင်ယာလန်၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဆွစ်ဇလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ စသောနိုင်ငံများနှင့် အာဖရိကတိုက် တောင်ပိုင်း ဆူဒန် တွင် သာသနာပြုလျှက်ရှိကြပါသည်။ စိတ်၊ နှလုံး အားလုံးဖြင့် ကျွှန်ုပ်တို့၏ ကျင့်စဉ်နှင့်အညီ သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသော မိတ်ဆွေများဖြင့် ဂတိပြုလျှက် မတူညီကွဲပြားခြင်းများကို လေးစား လျှက် အစေခံလျှက်ရှိကြပါသည်။
FCJ သီလရှင်များ မြန်မာပြည်သို့ သာသနာပြု စတင်လာပုံ
သီလရှင်သုံးပါး ဖြစ်သော စစ္စတာရ် အာဂနက်စ် နှင့် စစ္စတာရ် စစ္စကား (အင်ဒိုနီရှားလူမျိုးများ)၊ စစ္စတာရ် မာရီယံ( အိုင်ရစ်လူမျိုး) တို့သည် ၂၀၀၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၉)ရက်နေ့ တွင် မြန်မာပြည်၊ ရန်ကုန်တွင် ပထမဦးစွာ စတင်သာသနာပြုလာခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံး မြန်မာ FCJ သီလရှင်နှစ်ပါးဖြစ်သော စစ္စတာရ် မာရိယာခိုင်ငြိမ်းအေးနှင့် စစ္စတာရ် စီစီးလျှား မရစ်မ်ဆိုင်းဂျာ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ရရှိပါပြီ။ ယခုလက်ရှိ ရန်ကုန် community တွင် စစ္စတာရ် စစ္စကား၊ စစ္စတာရ် နာနီ၊ စစ္စတာရ် ဘယ်လ်တား နှင့် စစ္စတာရ် စီစီးလျှား မရစ်မ်ဆိုင်းဂျာ သီလရှင်လေးပါး တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိကြပါသည်။
FCJ သီလရှင်များသည် အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်မောင်မယ်များ၊ လူငယ်အဖွဲ့များ နှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍများစွာ ၌ ျအထူးပါဝန် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပြီး၊ သာသနာနယ်အသီးသီးပိုင်အဆောင်များရှိ လူငယ်များအား ဝိညဉ်ရေးရာ လမ်းညွှန်းပေးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်မြင့်တင်ပေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဝိတ်ညာဉ်ရေးရာများကိုလမ်းညွှန်းပေးပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများအားလစဉ် ဝတ်စောင့်ပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြပြီး၊ ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်း ဒလန်မြို့ ၌ လည်းမူကြိုကျောင်းဖွင့်ထားပါသည်။
လက်ရှိတွင် စစ္စတာရ် စစ္စကား က Myanmar Leadership Institute တွင်စာသင်ပေးနေပြီး၊ စစ္စတာရ် နာနီ က Campion Institute ၌ ဝိညဉ်ရေးရာ လမ်းညွှန်းပေးသူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး၊ စစ္စတာရ် ဘယ်လ်တား က မြန်မာစာကို သင်ယူနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ စစ္စတာရ် စီစီးလျှားက FCJ မူကြိုကျောင်းတာဝန်ခံအဖြစ်နှင့်( GEN) ကျား၊ မ တန်းတူ ညီမျှ ရေးကွန်ယက် တွင်အချိန်ပိုင်း လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
FCJ သီလရှင်များသည် မြန်မာပြည်၌ သာသနာပြုလာခဲ့သည်မှာ ၁၀ နှစ် နီးပါးရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အသင်းဂိုဏ်၏ နှစ် (၂၀၀) ပြည့်ရာပြည့်ပွဲတော်ကြီးကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ ကျင်းပ ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်စဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြန်မာပြည်ရှိ လူသားတို့၏ဘဝ ရှင်သန်တိုးတက်လာရန် ယုံကြည်မျှော်လင့်ရှိကြပါသည်။
ယေဇူး၏ သစ္စာရှိသော မိတ်ဆွေများ (FCJ) သီလရှင်ကျောင်း
၃၃(A)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၈)၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
FCJ Sisters are called to follow Jesus in faithfulness, to stand at the foot of the cross with Mary and the holy women and there, to become one with Christ in his thirst for the coming of the reign of God. Strong in companionship with Jesus and with each other we work together in the service of the Church to build the body of Christ. FCJ Sisters live Ignatian Spirituality and seek to find God in all people, in all places and in all things.
သခင္ေယဇူး၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ မယ္ေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာသူေတာ္သူမမ်ားကဲ့သို႔ ကားတိုင္ေျခရင္းတြင္ သခင္ေယဇူး၏ သစၥာရွိေသာမိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ေရာက္ရွိရန္ သခင္ေယဇူး၏ျပင္းျပေသာ ေတာင္းတမြတ္သိပ္မႈ၌ တစ္လုံးတစ္ဝတည္းရွိရန္ ေယဇူး ၌ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိတ္ေဆြရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္မ်ားအျဖစ္ သခင္ေယဇူး၏ သစၥာရွိေသာမိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဂိုဏ္း သီလရွင္မ်ားသည္ စိန္အိန္႔နီးရွတ္၏ ဝိညာဥ္ေရးရာ က်င့္ႀကံျပီး ဘုရားရွင္အား အရာအားလုံး၊ လုသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ား အားလံုး ၌ ရွာေတြ႔ရင္းျဖင့္ သာသနာျပဳလွ်က္ရွိႀကပါသည္။
The essence of our mission as Faithful Companions of Jesus is to be with Jesus in his mission. As the FCJ Constitutions state, we are called, like Mary, Mother of Jesus and Mother of the Church, and like the holy women, messengers of the Good News. We are sent to proclaim the Truth, Jesus who is alive and lives among us, who is Son of God and Saviour of the world. Mission is the whole of our lives given in service: it is not only what we do but more importantly who we are. Wherever we are and whatever our work, we are sent and our mission is to be faithful companions of Jesus.
We are now widely spread, living in the Area of Asia (Indonesia, Myanmar, and the Philippines), Area of Australia, Area of the Americas (Canada, USA, and Argentina) and the Area of Europe, (Ireland, Britain, France, Switzerland, Belgium, Germany, Italy and Romania). We also minister in South Sudan, Africa. We are united in heart and mind, committed to living our charism of faithful companionship with Jesus and are enriched by our cultural diversity and internationality.
On January 9th 2009, the FCJ Sisters started their mission in Myanmar. Three sisters: Agnes Samosir and Fransisca Arti Setiati (both from Indonesia) and Marion Dooley (from Ireland) were sent to established the first community in Yangon. With joy we welcome two of our first Myanmarese FCJ when Maria Khaing Nyein Aye and Cecilia Marip Seng Ja made their first vows in Yangon on December 8, 2018. The community in Yangon now has four FCJ sisters: Emiliana Beta Suryawati, Fransisca Arti Setiati, Maria Sunarni and Cecilia Marip Seng Ja.
The FCJ Sisters are involved in education as well as in the informal education of various women’s groups, youth groups, young adults and children. They are also involved in the spiritual development of people and have programmes in boarding houses and parishes, personal spiritual accompaniment andamonthly retreat for young women. We also haveapreschool in Dalla, Yangon.
At present Sr. Sisca works at Myanmar Leadership Institute and Sr. Narni works in Pastoral ministry at Campion Institute. Sr. Beta still learns Burmese while at the same time involves in youth ministry. Sr. Cecilia is the coordinator for preschool and also is working part time in GEN (Gender Equality Network)
Having been in Myanmar for almost ten year, and celebrating 200 years of FCJ in the world, we hope that FCJ roots grow deeper, and FCJ charism and spirituality to flourish in the lives of the people in Myanmar.
သခင္ေယဇူး၏ သစၥာရွိေသာမိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ သခင္ေယဇူးႏွင့္သာသနာျပဳႀကရင္း၊ FCJ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းရွိသည္ႏွင့္အညီ မယ္ေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာသူေတာ္သူမမ်ားကဲ့သို႔ သတင္းေကာင္းေဝငွရန္၊ သခင္ေယဇူးသည္ ကွၽႊႏု္ပ္၌ ရွင္သန္လွ်က္ရွိေနေသာ အမွန္တရားျဖစ္ေႀကာင္းႏွင့္ ေလာကအျပစ္ကိုကယ္ခွၽႊတ္ေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ျဖစ္ေႀကာင္း ေႀကညာေဝငွရန္ ကၽႊႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာ မဟုတ္ပဲ ကၽႊႏု္ပ္တို႔မည္သူျဖစ္သည္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးေပါင္းစပ္လွ်က္ သခင္ေယဇူး၏ သစၥာရွိေသာမိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ဘဝတစ္ခုလံုးေပးဆပ္ ဆက္ကပ္သြားရန္ ေစလြတ္ခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။
သခင္ေယဇူး၏ သစၥာရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ား (FCJ) အသင္းဂိုဏ္းဝင္ သီလရွင္မ်ားသည္ အာရွဧရိယာတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖီလစ္ပိုင္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌၎၊ ႀသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၊ အေမရိကာဧရိယာတြင္ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား တို႔၌၎၊ ဥေရာပတိုက္ဧရိယာတြင္ အုိင္ယာလန္၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ စေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္ တြင္ သာသနာျပဳလႇ်က္ရွိႀကပါသည္။ စိတ္၊ ႏွလုံး အားလံုးျဖင့္ ကႊ်ႏု္ပ္တို႕၏ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ သခင္ေယဇူး၏ သစၥာရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖင့္ ဂတိျပဳလွ်က္ မတူညီကြဲျပားျခင္းမ်ားကို ေလးစား လွ်က္ အေစခံလွ်က္ရွိႀကပါသည္။
FCJ သီလရွင္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ သာသနာျပဳ စတင္လာပံု
သီလရွင္သံုးပါး ျဖစ္ေသာ စစၥတာရ္ အာဂနက္စ္ ႏွင့္ စစၥတာရ္ စစၥကား (အင္ဒိုနီရွားလူမ်ိဳးမ်ား)၊ စစၥတာရ္ မာရီယံ( အိုင္ရစ္လူမ်ိဳး) တို႔သည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ (၉)ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးစြာ စတင္သာသနာျပဳလာခဲ့ႀကပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕တြင္ ပထမဆံုး ျမန္မာ FCJ သီလရွင္ႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ စစၥတာရ္ မာရိယာခိုင္ျငိမ္းေအးႏွင့္ စစၥတာရ္ စီစီးလွ်ား မရစ္မ္ဆိုင္းဂ်ာ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ရရွိပါျပီ။ ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္ community တြင္ စစၥတာရ္ စစၥကား၊ စစၥတာရ္ နာနီ၊ စစၥတာရ္ ဘယ္လ္တား ႏွင့္ စစၥတာရ္ စီစီးလွ်ား မရစ္မ္ဆိုင္းဂ်ာ သီလရွင္ေလးပါး တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိႀကပါသည္။
FCJ သီလရွင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအခန္းက႑မ်ားစြာ ၌ ်အထူးပါဝန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိျပီး၊ သာသနာနယ္အသီးသီးပိုင္အေဆာင္မ်ားရွိ လူငယ္မ်ားအား ဝိညဥ္ေရးရာ လမ္းညႊန္းေပးျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ဝိတ္ညာဥ္ေရးရာမ်ားကိုလမ္းညႊန္းေပးပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလစဥ္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိႀကျပီး၊ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း ဒလန္ျမိဳ႕ ၌ လည္းမူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ထားပါသည္။
လက္ရွိတြင္ စစၥတာရ္ စစၥကား က Myanmar Leadership Institute တြင္စာသင္ေပးေနျပီး၊ စစၥတာရ္ နာနီ က Campion Institute ၌ ဝိညဥ္ေရးရာ လမ္းညႊန္းေပးသူအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျပီး၊ စစၥတာရ္ ဘယ္လ္တား က ျမန္မာစာကို သင္ယူေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ စစၥတာရ္ စီစီးလွ်ားက FCJ မူႀကိဳေက်ာင္းတာဝန္ခံအျဖစ္ႏွင့္( GEN) က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ် ေရးကြန္ယက္ တြင္အခ်ိန္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
FCJ သီလရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၌ သာသနာျပဳလာခဲ့သည္မွာ ၁၀ ႏွစ္ နီးပါးရွိလာခဲ့ပါျပီ။ အသင္းဂိုဏ္၏ ႏွစ္ (၂၀၀) ျပည့္ရာျပည့္ပြဲေတာ္ႀကီးကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၌ က်င္းပ ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ လူသားတို႕၏ဘဝ ရွင္သန္တိုးတက္လာရန္ ယုံႀကည္ေမွ်ာ္လင့္ရွိႀကပါသည္။
ေယဇူး၏ သစၥာရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ား (FCJ) သီလရွင္ေက်ာင္း
၃၃(A)၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၈)၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြက္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။